सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को लागी एक कम्प्यूटर मा मोन्टेज बनाउन को लागी मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | | इन्टरनेट
हाम्रो कल्पनाहरु अविश्वसनीय उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्छौं यदि हामीसंग सही उपकरण छ। यस्तो फोटो र छविहरु संग काम गर्ने मामला हो, एक क्षेत्र हो कि हाम्रो दुनिया मा धेरै र अधिक वजन छ, दुबै पेशेवर क्षेत्र मा र हाम्रो निजी फुर्सद मा। आज हामी यो पत्ता लगाउन को लागी कोशिश गर्ने छौं कम्प्यूटर मा फोटो को montages बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम.
एक प्रभावशाली छवि संग तपाइँको ग्राहकहरु आश्चर्य, तपाइँको विद्यार्थीहरुको ध्यान आकर्षित, टिप्पणीहरु को एक ब्यारेज काट्नुहोस् र तपाइँको सामाजिक नेटवर्क मा "मनपर्छ" वा मात्र तपाइँको साथीहरु संग एक हाँसो छ। यी मात्र केहि चीजहरु को लागी तपाइँ यी प्रोग्रामहरु को लागी काम गर्न सक्नुहुन्छ।
सूची कि हामी अर्को देखाउन जाँदैछौं उपयोगी उपकरण को एक चयन आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न। ती मध्ये धेरै जसो हामी पाउन सक्छौं र स्टोर मा सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोर, तपाइँको मोबाइल फोन बाट सजीलै उनीहरुलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन।
हाम्रो सूची समावेश छ नौ प्रस्ताव (यद्यपि त्यहाँ धेरै धेरै हुन सक्छ), जुन हामी वर्णमाला क्रममा प्रस्तुत गर्दछौं। ती सबै सबै धेरै सरल र सजीलै प्रयोग गर्न को लागी विकल्पहरु हुन्, ती मध्ये केहि राम्रो अरु को तुलना मा ज्ञात छन्, तर ती सबै शानदार परिणाम प्राप्त गर्न को लागी एकदम सही।
3 फोटो कोलाज
5 तस्वीर कटआउट गाइड
8 Textaizer प्रो
9 तपाइँको आवरण
एडोब फोटोशप एक्सप्रेस: ​​एक कम्प्यूटर मा फोटो को montages बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम?
हामी संग हाम्रो सूची खोल्नुहोस् Adobe Photoshop Express, एक नि: शुल्क मोबाइल अनुप्रयोग हो कि हामीलाई छिटो र शक्तिशाली फोटो सम्पादन धेरै सजीलो बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। यसले हामीलाई कोलाज बनाउन को लागी मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, तत्काल फिल्टर ("देखिन्छ" भनिन्छ) को आवेदन को लागी धन्यवाद, हामी हाम्रा छविहरु सुधार गर्न र सामाजिक सञ्जाल मा तुरुन्तै साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
एक राम्रो छवि सम्पादक को अपेक्षित सबै आधारभूत प्रकार्यहरु को अलावा, Photosohop को यो संस्करण पनि हामीलाई कोलाज सम्पादन गर्न, मेम्स बनाउन र फोटोमन्टेज को सबै प्रकार बनाउन मा मद्दत गर्दछ।
माउन्ट र सम्पादन पछि, इन्स्टाग्राम वा कुनै अन्य सामाजिक सञ्जाल मा नतिजा साझा गर्ने कार्य को रूप मा यो तुरुन्तै सरल छ।
छोटकरीमा, यो बारेमा छ एक पूर्ण, सुरक्षित र नि: शुल्क आवेदन। यति सजीलो प्रयोग गर्न को लागी कि केहि मिनेट मा तपाइँ यसको साथ अविश्वसनीय photomontages को सबै प्रकार को बनाउन सक्नुहुन्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Adobe Photoshop Express
Bixorama संग शक्ति को लागी कल्पना
बिक्सोरमा यो एक साँच्चै शानदार आवेदन हो। यसको साथ तपाइँ सक्नुहुन्छ तेह्र फरक ढाँचामा कुनै पनोरमिक फोटो परिवर्तन, जसलाई अधिक हड्ताल: क्षेत्रहरु, छवि स्ट्रिप्स वा क्यूब्स, कोणीय नक्शा र धेरै अन्य। उनीहरु मध्ये हामीले केहि विशेष गरी लोकप्रिय जस्तै एप्पलको क्विकटाइम वीआर र माइक्रोसफ्टको डाइरेक्टएक्स डीडीएस लाई हाइलाइट गर्नु पर्छ।
यो जटिल लाग्छ, तर वास्तव मा बिक्सोरमा संग काम गर्न धेरै सजिलो छ। विधि मूल रूप बाट छवि को आयात हो कि हामी कार्यक्रम मा रूपान्तरण र लक्षित ढाँचा को एक छनौट गर्न को लागी हुन्छ। यो सबै अपरेशन को माध्यम बाट धेरै छोटो र सजीलै निष्पादित गरिन्छ सहज इन्टरफेस कार्यक्रम को। क्लिक को एक जोडा र तपाइँ सकियो।
यो कुनै पनी मामला मा ध्यान दिनु पर्छ कि Bixorama एक पैनोरमिक छविहरु संग काम गर्न को लागी डिजाइन गरीएको सफ्टवेयर हो। उदाहरण को लागी पोर्ट्रेट फोटो मा नतीजा कम दिखावटी छन्।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: बिक्सोरमा
जब यो कोलाज को लागी आउँछ, फोटो कोलाज एक कम्प्यूटर मा फोटो को montages बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम हुन सक्छ।
कोलाज बनाउन को लागी धेरै कार्यक्रम र मोबाइल अनुप्रयोगहरु छन्। अन्य शब्दहरुमा, त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा र छनौट गर्न को लागी एक धेरै छ। जे होस्, पहिलो स्थान को लागी एक उम्मेदवार हो फोटो कोलाज (उसको नाम यो सबै भन्छ)।
यो एक अनुप्रयोग हो कि तपाइँ सम्पादन गर्न को लागी र छिटो र सजीलो छविहरु मा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। यसको साथ, रमाईलो र मूल कोलाज बनाउन धेरै सरल छ: मात्र फोटो को एक श्रृंखला को चयन गर्नुहोस् र क्रम मा "टाँस्न" जाने क्रम मा तपाइँ एक पृष्ठभूमि मा छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। A लगभग कारीगर विधि, पुरानो फोटो एल्बम बाट क्लासिक कोलाज जस्तै।
अधिक शानदार परिणामहरु प्राप्त गर्न को लागी हामी हाम्रो निपटान मा फिल्टर, पाठ, स्टिकर र अन्य प्रभावहरु को सबै प्रकार छन्। यसको अतिरिक्त, हामी ग्यालरी मा हाम्रो कोलाज बचत गर्न सक्दछौं उनीहरुलाई पछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा साझा गर्न को लागी।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: फोटो कोलाज
रचनात्मक photomontages को लागी: Photofunia
फोटोफुनिया हाम्रो फोटोहरु लाई रचनात्मकता को एक स्पर्श दिन को लागी एक महान अनुप्रयोग हो। यसको साथ हामी कुनै पनी छवि एक साँच्चै मौलिक र कलात्मक रूप दिन सक्षम हुनेछौं, धेरै उपकरण, प्रभाव र टेम्प्लेट को उपयोग को लागी धन्यवाद।
विकल्पहरु मध्ये यो कार्यक्रम हामीलाई प्रदान गर्दछ, हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं कि पृष्ठभूमि वा कपडा को कुनै पनि प्रकार मा हाम्रो छवि राख्नु, हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत यातायात संकेत बनाउन, एक बिलबोर्ड मा देखा पर्न वा एक प्रसिद्ध व्यक्ति संग एक रेस्टुरेन्ट टेबल साझा, धेरै अन्य को बीच।
यो पनी एक धेरै सजिलो कार्यक्रम को उपयोग गर्न को लागी, प्रयोगकर्ता को लगभग कुनै पनी प्रकार को लागी बिल्कुल किफायती छ। तर सबै भन्दा माथि PhotoFunia रमाईलो को पर्यायवाची हो- संभावनाहरु लगभग कुनै पनि सेटिंग कल्पना मा मूल र उल्लसित montages सिर्जना गर्न को लागी।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: फोटोफुनिया
तस्वीर कटआउट गाइड
यो सायद शुरुवातकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो कम्प्यूटर फोटो असेंबल कार्यक्रम हो। तस्वीर कटआउट गाइड Photomontages को सबै प्रकार बनाउन शुरू गर्न एक फोटो सम्पादन उपकरण हो।
यो सफ्टवेयर प्रदान गर्दछ, अरु को बीच, निम्न उपकरणहरु:
फराकिलो किनारा, यसको पृष्ठभूमि बाट एक वस्तु अलग र क्रम मा छविहरु को कोलाज बनाउन र पृष्ठभूमि प्रभाव लागू गर्न को लागी यसलाई पछि भण्डार गर्न को लागी।
स्मार्ट प्याच, जसलाई हामी फोटो को एक क्षेत्र "फोटो" को अर्को क्षेत्र बाट एक "प्याच" संग प्रतिस्थापन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्छौं।
तस्वीर कटआउट गाइड पनि आधारभूत कार्यहरु कि कुनै अन्य साधारण छवि सम्पादक सम्मिलित गर्दछ। एक राम्रो उपकरण शुरू गर्न को लागी र बिल्कुल नि: शुल्क। अवश्य: यो कोलाज बनाउन को लागी उपयोगी छैन।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: तस्वीर कटआउट गाइड
Pixlr, एक महान उपकरण photomontages बनाउन
यहाँ एक कम्प्यूटर मा फोटो को montages बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को शीर्षक को लागी एक महान उम्मेदवार हो। Pixlr हाम्रो निपटान मा सबै आवश्यक उपकरणहरु राख्छ सबैभन्दा रमाईलो र काल्पनिक photomontages बनाउन को लागी।
सफ्टवेयर धेरै समावेश गर्दछ टेम्प्लेट यूट्यूब थम्बनेल, इन्स्टाग्राम कथाहरु वा फेसबुक पोस्ट, उदाहरण को लागी बनाउन को लागी डिजाइन गरीएको छ। त्यहाँ पनि कोलाज बनाउन को लागी विशेष गरी बनाईएको टेम्पलेट्स छन्। अन्य रोचक कार्यहरु पोर्ट्रेट, selfies, प्रोफाइल फोटो, साथ साथै फिल्टर र दृश्य प्रभाव को एक धेरै मा पृष्ठभूमि को मेटाउने छन्।
यी सारांश मा Pixlr को सफलता को लागी कारण हो, द्वारा प्रयोग गरीएको एक कार्यक्रम हो विश्वव्यापी 500 मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Pixlr
एक छवि को पृष्ठभूमि हटाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो आवेदन: Remove.bg
कहिलेकाहीँ प्रभावशाली photomontages मात्र हटाउन वा एक छवि को पृष्ठभूमि परिवर्तन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस को लागी, सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो हटाउनुहोस्.बीजी (अन्तिम "bg" शब्द संग मेल खान्छ पृष्ठभूमि, त्यो हो, पृष्ठभूमि)।
छवि पेशेवरहरु, मार्केटि creat रचनात्मक वा केवल निजी प्रयोगकर्ताहरु यस उपकरण को functionalities बाट लाभ उठाउन सक्छन्। Remove.bg को बारे मा सायद सबैभन्दा हड्ताल गर्ने कुरा यसको हो प्रयोगमा सजिलो। केहि सेकेन्ड को एक मामला मा हामी यसलाई खाली छोड्न को लागी कुनै पनी फोटो को पृष्ठभूमि हटाउन सक्छौं, वा हाम्रो छनौट को अर्को राख्न को लागी।
यो जस्तै एक कार्यक्रम संग धेरै उत्सुक photomontages बनाउन सकिन्छ। हामी, उदाहरण को लागी, नक्कली चीन को लागी एक यात्रा हाम्रो छवि को पछाडि महान पर्खाल संग पृष्ठभूमि राखेर, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाउन वा हाम्रो सामाजिक सञ्जाल को लागी एक मूल प्रोफाइल छवि डिजाइन गरेर गर्न सक्छौं।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: हटाउनुहोस्.बीजी
Textaizer प्रो: पाठ मा कुनै पनि छवि रूपान्तरण
यो के प्रदान गर्दछ Textaizer प्रो यो केहि धेरै मौलिक छ कि हामी यसलाई एक कम्प्यूटर मा फोटो को montages बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को लागी हाम्रो खोज मा शामिल गर्न को लागी छ।
हामी एक नि: शुल्क कार्यक्रम को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं एक मोज़ेक मा कुनै पनि तस्वीर बदल्नुहोस्। तर न केवल कुनै पनी मोज़ेक, तर एक पाठ संग बनाईएको हो। चमत्कार को काम गर्न को लागी तपाइँ मात्र एक हात मा एक पाठ फाइल र अर्को मा एक छवि चयन गर्न को लागी छ। त्यहाँ बाट, तपाइँ मात्र कार्यक्रम सबै कुरा को ख्याल राख्न दिनुपर्छ।
नतिजाहरु सबैभन्दा आकर्षक छन्। धेरै Textaizer प्रो प्रयोगकर्ताहरु लुकेका सन्देशहरु संग छविहरु बनाउन वा केहि साहित्यिक पाठहरु को लागी एक नयाँ र रचनात्मक रूप दिन को लागी यो रोचक प्रकार्य को उपयोग गरीएको छ। यस सफ्टवेयर संग प्राप्त केहि परिणामहरु छन् कला को प्रामाणिक कामहरु.
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Textaizer प्रो
सूची बन्द गर्न को लागी, मूल को रूप मा एक विकल्प को रूप मा यो रमाईलो छ: तपाइँको आवरण। के हामी सबैले कहिल्यै कुनै पत्रिकाको आवरणमा भएको कल्पना गरेका छैनौं? झुटो भए पनि।
हामी आफैंलाई यो एक कार्यक्रम वा आवेदन, तर एक वेबसाइट नभएको बावजूद समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। र भुक्तानी को अतिरिक्त मा, मामलाहरु लाई नराम्रो बनाउन को लागी। त्यो हो, यो पोस्ट को शीर्षक द्वारा घोषित आधार संग अनुपालन गर्दैन, तर यो पक्कै धेरै प्रयोगकर्ताहरु को लागी धेरै रोचक हुनेछ।
El कसरी प्रयोग गर्ने यो धेरै सरल छ: तपाइँ एउटा टेम्प्लेट छनौट गर्नुहोस् (त्यहाँ सबै थिमहरु छन्), एक छवि जोड्नुहोस्, पाठ, प्रभाव र अन्य तत्वहरु जोड्नुहोस् र हामी हाम्रो पत्रिका आवरण तयार छ। तब हामी सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट हाम्रा सबै साथीहरु र सम्पर्कहरु संग साझा गर्न सक्छौं र एक महान समय छ।
लिङ्क: तपाइँको आवरण
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को लागी एक कम्प्यूटर मा मोन्टेज बनाउन को लागी
कहाँ दक्षिण पार्क हेर्न को लागी: सबै मौसमहरु